Dadka maraykan ee tan iyo hadda lagu abaalmariyey darajada ”nobelbarays” waxaa tolka Yuhuudda ahaa 40%. Macallimiinta jaamacadaha dhiga waxaa ka mid ah qaar sare oo loo yaaqaan barafasoor, waxaana dalkaas (USA) Yuhuud ah 20%.
Hoggaanka qareemada Niyuu Yook iyo Washiton waxaa ayaga ah 40%. Joornaallada iyo guud ahaan waxyaalaha la daabaco waxaa saxaafad iyo qoraal kaleba madaxda hagta Yuhuud ah 26%.
Nolosha dabeecaddeeda haddii laga daliilqaato waxay garashada dadka u soo jiiddaa awood, tanti iyo magac. Markii ay dadka garashada kore lihi xoogga hagitaanka, dhaqaalaha iyo muuqaaldheerida helaan waxay noqdaan dabaqadda sare ee nolosha bulshada, waxayna dareemaan kalsooni iyo rayrayn ay ku sii dhiirradaan sidii ay u sii tillaabsan lahaayeen iyo sidii ay u xagsan la haayeen arrimahaas ay ayadu garashadooda ku gaareen.
Bulshada kor u kacday waxay heshaa kalsooni iyo siisocod, halka ay kuwa haray kala dabayaacaan masayr iyo nacayb. Waxaa markaas abuurma colaado iyo haaraan aan weligiis soo afjarmayn, oo laga yaabo in aysan dadkii bilaabay u haysan daliilo la taaban karo ee tuhun iyo xin la isku dhexfaafiyey u badan.
Marka ay arrimahaani sii durkaan waxay u xuubsiiban karaan midab sidii aynu horay u soo sheegnay, waayo waxaynu maanta og nahay in ay carabta iyo caddaanku u bukaan Yuhuud, halka ay madowgii laga roonaaday ee Ameerka lagu bahdiley ayaga oo ay garashadoodu saqiir ahayd u cuqdadaysan yihiin dadkii addoonsaday oo weli ka sarreeya.
In arrin qolo gaar ah loo qiro ama lugu tilmaamaa waxay ka mid tahay waxyaalaha la cabburiyo, oo aan xataa haddii cilmi ahaan oo baaro lagu dhiirran karin. Takhtar ingiriis ah, Rober Bannister, baa 1995 wuxuu sheegay in ay dadka uu dubkoodu madow yahay orodka iyo bootada kaga fiican yihiin dadka kale. Dabdeed tababare akademi oo asaguna isla dalkaas magaalada Berkeley joogey baa wuxuu ku dhiirradey in ay madowgu orodka iyo bootada kaga suubban yihiin dadka midabbada kale leh. Ninkaasi wuxuu mutay dhibaatooyin uu ka soo waaqsan waayey, oo ay ugu fududayd in uu shaqadiisii dhawr sano seegay.
Doodda midabka u saabsani hubaal ma aha xagga garashada oo arrinteeda weli looma madaxbanaana in miiska la soo saaro, hase ahaato ee waxaa cad in ay qofka garashadiisu cuskan tahay bulshada uu ku dhexkoray hiddeheeda iyo heerka horumarkeeda.
Waxaynu hubnaa in ay Cali-Dhuuc iyo Aadan-Carab ahaayeen labo nin oo leh karti fiican oo ay ku gabyi kareen, waxayna malaheenna ku barbaareen Buuhoodle. Markii uu mid kastaa hal sano jirey haddii inta Buuhoodle laga qaado la geyn lahaa Mundul Baraawe oo ay 25 sano halkaa ku gaari lahaayeen ma loo malaynayn karaa in ay kartidooda maansadu ahaan lahayd sidii ay ahayd?
Sidii ay tukashadu u dhacday bay labadoodu iska waraysteen, waxaana la waraystay Xassan Bariiso. Iimaamku wuxuu ahaa shiikh dhallinyar, laakiin uu Rabbi ugu deeqay aqoon iyo aftahmo lala ashqaraaray. Waa shiikh Umal oo malaha ku soo barbaaray degaanka loo yaqaan Ogaadeen.
Axmed Maxamed oo uu Allihiis Alle yahay baa wuxuu Xassan weydiiyey su’aal fiicnayd, oo ahayd ”Ka warran khudbadii shiikha?”. Nasiib darro Xassan hadalkaas wuxuu ka dhexsawirtay qabyaalad iyo in asaga lagu yasayey. Hal mar buu codkii Xassan oo awalna xabeeb lahaa xanaaq la sii xabeebsaday, wuxuuna malaha u maleeyey in uu Axmed hadalka qallooc ula jeedey, oo uu ku hoosqarinayo ”Meeshii aad dhawaan ka timid lagama heli karo shiikh aftahan ah sida Umal”.
Markii hore ee ay ilaaqdaas kharaari labada dhexmaraysey waxaa laga yaabaa in ay marqaansanaayeen amaba ay cabsanaayeen, waayo shaqaalaha BBC intooda badan waxaa codkooda laga dareemaa in ay reero balwadeed yihiin, siiba kuwa reer woqooyiga ah.
Masayrku wuxuu sida badan kaashadaa cuqdad uu qof qabo ama shaki ay kooxi isku dhexbaahiyaan. Sidii aynu soo taabannay waxaa dhacay dagaallo badan ee masayr ka abuurmay.
Jeneraal Maxamed Siyaad intii uu ka baqayey in xukunka laga qaado ayuu wuxuu meel kasta u dhiibtey dadkii jamhuuridda oo dhan ugu garasho iyo aqoon liitey. Doqomadaas jaahiliinta baa 21 magacyadooda raadiyaha laga maqlayey, waxay shacabka qaarkood u qabaan in ay siyaasad iyo maamul wax ka garanayaan.